lululemon မှာကလေးအဝတ်အစားရှိလား။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ကလေးများ lululemon - ဘုံမေးခွန်းများကို
ကလေးများ lululemon - ဘုံမေးခွန်းများကို
LululemonAthletica သည် activewear နှင့် casual ဖြစ်သည်အဝတ်အစားစတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်ကလေးတွေ။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်သည်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အပြင်၌ကစားခြင်းတို့တွင်သူတို့၏အကောင်းဆုံးကိုကြည့်ချင်သောမိန်းကလေးငယ်များအတွက်စတိုင်ကျသည့်စုဆောင်းမှုကိုလည်းပေးသည်။
MusicHello အားလုံးကို Lucy နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောပါ၊ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပါ၊ ဒီနေ့ငါအဖွဲ့ခွဲဒီဇိုင်နာ ၁၀ ယောက်ကိုမင်းတို့နာမည်တွေပေးမယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှားယွင်းစွာပြော၊ ငါဒီမှာလာခဲ့တာလား၊ အိုဟုတ်တယ်ကြည့်ကြရအောင်၊ ကြည့်ရတာကြည့်ပါ ဦး၊ လက်ချောင်းများပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်ငါ့ကိုအပြစ်တင်လိမ့်မည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့သြမိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသံကြောင့်သင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဘာပြောခဲ့လဲ၊ ငါဟာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အသံထွက်ကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ မင်းဘယ်လိုစကားပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး။
မင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးအသံထွက်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်မင်းကိုပိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ထဲကများစွာသောမင်းဒီမှာသွားမယ်။ သင်ဤအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ။ မင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုအဆင့်တစ်ဆင့်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် 'Audible' ကိုငါတကယ်ထောက်ခံတယ်။
ဖော်ပြချက် box ထဲမှာ link, သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပြီးသင်ရက်ပေါင်း 30 အဘို့အအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် audiobook များအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ငါမှာအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်လေသံနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်စာဝဲနဲ့ဖတ်ထားတဲ့ Audiobooks အတွက်အကြံပြုချက်တွေရှိတယ်။ သင်နှင့် ပို၍ သက်ဆိုင်သည့်အရာကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒါကဆိုပါတယ်ခဲ့သည် ဒီဆောင်းပါးနဲ့စကြရအောင်။ ပထမတစ်ခုမှာ Hermes ဖြစ်သည်။
Heyyy တကယ့်ကိုလှပတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပါ။ သူတို့ဖန်စီခါးပတ်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲလိုချင်ခဲ့တယ်။
ငါတ ဦး တည်းအပြစ်လွတ်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ဒီတစ်ခုနဲ့ 'HƠ-MEI-S' လို့အသံထွက်ခဲ့တယ်။ သုတေသနပြီးတဲ့အခါမှာ 'E-MES' အသံထွက်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်
အဘယ်ကြောင့် Lululemon ivivva ကိုရပ်တန့်ခဲ့တာလဲ
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အရာတွေကိုပိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီivivvaကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ကြီးထွားမှုကိုထောက်ပံ့ရန်စွမ်းရည်ကိုသော့ခတ်နိုင်ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အမေရိက၏အမှုဆောင်ဒုဥက္ကpresident္ဌ Celeste Burgoyne နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ guest ည့်သည်တီထွင်မှုများအတွက်LululemonCNBC သို့အီးမေးလ်ပေးပို့သည့်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Lululemon ဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုရင်၊ ဂူဂဲလ်ကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်နေပြီ။ ငါချစ်တယ်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုငါမုန်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ ၀ တ်စားတာကိုနှစ်သက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကငါ့ကိုမုန်းတယ်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ Lululemon leggings သုံးခု။ ငါနဲ့အတူ Lululemonor ကိုဘယ်တော့မှမဝယ်ဖူးရင်ငါ့ထင်မြင်ချက်အရကောင်းမွန်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါနင့်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ leggings တွေဟာတကယ်ကျိုးနပ်ပါတယ်။ Lululemon နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတယ်။ အားလုံးခေါက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတော်များများကလဲကျန်းကျင်ငယ်လေးတွေကြိုက်တယ်သေချာတာပေါ့၊ ငါဒီဆောင်းပါးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ Lululemon ကခြေထောက်တွေပါ။ နှစ်သုံးလေး - နှမ်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါပြီ။ ယခုကျွန်တော်တို့ ၅၆ ၇ ၈ ၉ ကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ ဒါကခြေထောက် ၉ စုံပါ။ ဒေါ်လာ ၉၀၀ လောက်ပေါ့။ ဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မုန်းတယ်။ dene ni ပြောသောအရာမှတည့်တည့်ဘောင်းဘီနှင့်ဘောင်းဘီအောက်ရှိအံ့ဖွယ်အမှုများသည်အလွန်များပြားနေသည် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်တက်တာကိုရပ်တန့်တော့မယ်။ ဆောင်းပါးထဲကိုခဏလေးဝင်ကြည့်ပါမယ်။ ပထမဆုံးပြောရမဲ့စကားကဘောင်းဘီအောက်မှာအံ့ဖွယ်အမှုပါပဲ။ ဒါက Lululemon အတွက်မိတ်ဆက်ဘောင်းဘီတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘောင်းဘီထဲက Lululemon ကိုသွားတဲ့လူအများစုက ၀ ယ်ဖို့ပထမဆုံးဘောင်းဘီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်က yoga နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အားကစားရုံ၌အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ် lululemon အဝတ်အစားအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုသင်မသိရှိသော်လည်းဤ pants များသည် lululemon pant အတွက်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်သည်။ ဘောင်းဘီအောက်ရှိအံ့ဖွယ်အမှုကအလွန်မိတ်ဆက်ပေးသည့်ဘောင်းဘီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘောင်းဘီအောက်ရှိအံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပုံတစ်ပုံကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ယောက်၏ပုံသဏ္youာန်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဓိကသော့ချက်မှာ Luon ထည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာကြင်နာမှုကငါ့ကိုဝါဂွမ်းတစ်မျိုး၊ ဒါကအရမ်းကိုကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကခက်တယ်၊ အနည်းငယ်သောဖိအားပေးမှုခံစားမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မြင့်မားသောအံ့အားသင့်ဖွယ် panties များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြင့်ဆုံးဘောင်းဘီများအားလုံး ၀ ယ်သည်။ အလွန်မြင့်မားသည်ကျွန်ုပ်သည်အရပ်ရှည်သောငါ ၁.၈၀ မီတာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းမှာရှိသည့် muffin top ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲ ၄ င်း၏မိသားစု ၄ စုကိုထောက်ပံ့ရန်အလုံအလောက်စားခဲ့ပြီးသောကြောင့်အရာရာကိုပွေ့ဖက်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားလှိမ့်မည်ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အရမ်းပျော်တယ်၊ ထည်ကအရမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသင်နဲ့အတူလှည့်ပတ်တယ်။ ဒီဘောင်းဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကနည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ငါပြေးနေတဲ့အပြေးသမားတစ်ယောက်ဟာငါရှိနေတဲ့တခြားဂေါက်သီးတွေထက်အများကြီးပိုမြန်တာကိုငါခံစားရတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဟာဆေးပြားတစ်တန်လိုမျိုး၊ သူတို့ထဲက ၂ ခုကမင်းကိုကိုင်နေတယ်၊ ​​သူတို့ဒီမှာရှိနေတာကိုသင်ဟန်ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါမှန်းဆလို့မရဘူးလားမသိဘူး။ ငါကဟင်းခတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဒီဘောင်းဘီတွေမှာတော့ငါဟာအခြားဟင်းအချို့မှာလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါဆိုသတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ နောက်တစ်ခုပြောရမယ့်ဘောင်းဘီနှစ်ချောင်းကို align pants နဲ့ align pants ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါသတိထားပါ။ ကိုယ့် youtube မှာလေ့ကျင့်ခန်းဆောင်းပါးတိုင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့တိုင်း instagram ဆောင်းပါးကိုမြင်လျှင် thefitness youtube ကိုသြဇာသက်ရောက်သော aalign pant တူ align pant align pant align တူသောပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဝကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစားနှင့်တူကြောင်း youtube မှာတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆောင်းပါးကိုမြင်လျှင်ငါကရခဲ့ရတယ်ကိုယ့် isamaz ing ပစ္စည်းပစ္စယပြောရမယ် ၎င်းသည် Lululemon ဇာတိဖြစ်သည်။
အဲဒါကို Nulu ထည်သစ်လို့ခေါ်တယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခြားဘောင်းဘီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအရေပြားနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
သူတို့ကငါ့ကိုမုန်းပြီးဒီဆောင်းပါးကိုမရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ငါ့ခွေးတွေဟောင်နေကြတယ်။ Nulu ထည်သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအရေပြားနှင့်တူသည်။ အဝတ်အချည်းစည်းခံစားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ငါတကယ်ထင်သည်မှန်၏။ align ဘောင်းဘီများသည်အလွန်ပါးလွှာသော်လည်း၎င်းတို့သည်ချောသိပ်ခြင်းမဟုတ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဘောင်းဘီတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလိုပါပဲသူတို့ဟာအရှည်အပြည့်အ ၀ align ဘောင်းဘီတွေနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ aligning pants ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့အခါမှာ ၇/၈ အရှည်၊ တကယ်တော့အရပ်ရှည်ရှည်ရှိသူတစ်ယောက်အတွက်ငါမရိတ်လိုက်ရင် ငါခြေဆံကိုမဖြုတ်ဘဲခြေထောက်ကိုမရိတ်လိုက်ဘဲတကယ့်တကယ်ခြေထောက်ပဲ။ အားလုံးကပြန်လာပြီ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအရှည်တည့်တည့်နဲ့ထွက်လာကြပြီးဘ ၀ ပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​ငါတို့ဂီတသံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ငါ့အကြိုက်ဆုံးကဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤရွေ့ကားကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော Hings အရာများဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းသည့် alignpant ၎င်းသည်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိအရှည်တစ်မျိုးတည်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဘောင်းဘီကို ၀ ယ်သည့်အချိန်နှင့်အတိအကျဘောင်းဘီကိုပထမဆုံးအကြိမ်အကြိမ်မည်မျှပြောနိုင်သည် ဘောင်းဘီသုံးခုကဲ့သို့ရပ်တန့်? စတိုးဆိုင်ရှိလူများအလုပ်လုပ်ကြပြီးသူတို့က“ အိုဘုရားသခင်၊ မင်းကကိုက်ညီတဲ့ဘောင်းဘီကိုရလိမ့်မယ်။ ငါတွေးမိတာပေါ့၊ မင်းဘုရား၊ ငါတို့တွေခဏလေးရှိခဲ့ရင်မင်းသူတို့ဘာလုပ်လဲလို့မေးတယ်။ သူတို့နဲ့အတူငါနင့်ကိုခိုးတာလို့ထင်တယ်၊ မင်းကစက္ကန့်လေးအတွင်းလေးလေးနက်နက်ဖြစ်နေတာနဲ့တူတယ်၊ ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါစဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ကငါ့ကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုမေးနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ့ထက်ပိုပြီး cardio လုပ်မနေသင့်လို့လား။ အဲဒီဘောင်းဘီထဲမှာ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာကျွန်တော်ချွေးတွေပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဝိုင်းရံထားတာကိုငါပြသနေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေဟာချွေးစေးနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်တာကြောင့်ထည်ကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကဒီဟာတွေကိုပြောတာပါ။ ယောဂကျင့်စဉ်သို့မဟုတ်လှည့်ပတ်ပျင်းရိခြင်းကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမင်းကြည့်ရှုနေတဲ့ဘောင်းဘီကိုဒေါ်လာ ၉၈ သုံးပြီး၊ ၁၂.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ချွေးထွက်အင်္ကျီကို ၀ ယ်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာဒေါ်လာ ၉၀ ကိုအများအားဖြင့်ချွေတာရတာဘာကြောင့်လဲ။ အားကစားခန်းမကိုအလေးမအားကစားရုံမှာသုံးပါ။ ငါပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒေါ်လာ ၉၈ လည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်နှစ်ခုလုံးအကြားကွဲလွဲနေပြီး Lululemon ကိုဘယ်တော့မှမစမ်းဖူးဘူးဆိုရင်ငါဟာ alignpants ကိုလိုချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ပြုပါ။ ကောင်းချီးနှင့်အတူသွားပါ။ မှန်သောနေရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောမည့်နောက်ဆုံးဘောင်းဘီဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြောခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်မှန်ကန်သောနေရာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အွန်လိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သော align အပြည့်အဝအရှည်များကဲ့သို့ ငါ့အကြိုက်ဆုံး lululemon ဘောင်းဘီနှင့်သူတို့ဘာကြောင့်ကြိုက်ရတာလဲအဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့မင်းလုပ်နိုင်မနိုင်ဆိုတာငါမသိတဲ့အတွက်ငါရိုက်နေတဲ့ဘောင်းဘီမှန်သမျှငါရိုက်နေတယ်ဘောင်းဘီ၊ တကယ်တော့မျိုးပုံ၊ ပိတ်လိုက်၊ ဘာကြောင့်ဒီဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးလဲ သင်မူကားသင်၌တွေ့သောအိတ်တစ်လုံးရှိကြောင်းပြသမည်။ သင်၌အိတ်တစ်ခုရှိသည်။ ဟင်းခတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ သင့်အတွက်အသင့်ရှိနေသောအိတ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကုဒ်မျှမရှိပါ၊ သင်၌အိတ်တစ်လုံးရှိသည်။ မင်းရဲ့အိတ်တစ်လုံးရှိတာကိုငါမေ့သွားပြီးတစ်ဝက်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးငါမင်းကိုအိတ်တစ်လုံးရှိသူနဲ့တူတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံးကောင်းသွားပြီ။ ဒီဟာကပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီးတင်းကျပ်နေသလိုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ကိုသေးငယ်ပြီးတင်းကျပ်လွန်းလို့မင်းခြေထောက်တွေအတွက် corset လိုမျိုးပေါ့။ သူတို့ကမင်းခြေထောက်တွေအတွက် corsets လုပ်တယ်။ google ကိုသိဖို့လိုတယ်။ ငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကို Wunder အကျဉ်းချုပ်လိုမျိုးဘောင်းဘီတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတာငါ့ကိုသိစေပါ။ မတူကွဲပြားတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်၊ သင်လုပ်နိုင်တဲ့ cardio ကိုလုပ်နိုင်တယ် ထိုအလေးချိန်ကိုမြှင့်ပါ၊ သင်ခေါ်သောယောဂကိုဤတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဒေါ်လာ ၁၂၈ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Wunder အကျဉ်းချုပ်နှင့် align များမှစျေးနှုန်းအနည်းငယ်ခုန်။ သွားသည်။ သို့သော်သင်က lululemon pants ရှိသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းကိုကြိုးစားလုပ်ရန်စဉ်းစားနေပါက ? တစ်စုံတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်မင်းကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ ဒီတစ်စုံကိုယူဖို့ကျွန်တော်အလွန်အမင်းအကြံပြုလိုပါတယ်၊ သူတို့ဟာအချိန်အတော်ကြာကြာရှည်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ငါတကယ်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီဘောင်းဘီတွေအကြောင်းပြောနိုင်တဲ့ဆိုးတာဘာမှမရှိဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Lululemon ဘောင်းဘီအကြောင်းသိချင်ရင် (သို့) အခြားမေးခွန်းများရှိရင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်များမှာထားခဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင်က Lululemon ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ပြီးပိုနှစ်သက်သောဘောင်းဘီသို့မဟုတ်အခြားစတိုင်လ်အကြံပေးချက်များရှိသည်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သူတို့ကိုထားခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သင်သဘောမတူသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်ပြောသောအရာအားလုံးကိုသဘောမတူပါကကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထိမိသည့်စကားဝိုင်းတစ်ခုစတင်သည်။ subscribe subscribe လည်းကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နောက်ဆောင်းပါးတွင်တွေ့သည်။
lululemon အရွယ်အစား 14 ရှိပါသလား
lululemonယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အရွယ်အစား 14ထိုကဲ့သို့သောအနက်ရောင် leggings နှင့်အဖြစ်အဓိကပစ္စည်းများအတွက်အရွယ်အစား12 ပစ္စည်းများအနည်းငယ်နှင့်ဝေးအကြားခဲ့ကြသည်။ အခုဆိုရင်အားကစားဘေ့စ်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီတွေ၊အရွယ်အစား12-၁၄။ သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်အရွယ်အစား12-၁၄ပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာကုန်သွားတော့မည် (OOS) ။ အားလုံးကိုကြည့်ပါ14 lululemon အရွယ်အစားအဝတ်အစား။
မင်းနောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုမင်းလွဲသွားပြီဆိုရင်ငါ Girlfriend Collective လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရွယ်အစားအားလုံးပါဝင်ပြီး၊ ငါသူ့ကိုချစ်တယ်။ ငါစွဲလမ်းတယ်
ငါပြောင်းလဲခဲ့သည် ငါကစူပါပန်ကာပါ ငါသည်အခြားဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, သူတို့သည်စူပါကြီးမားတဲ့ကြောင့်ငါ Instagram ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရှောက်။
ငါထင်တာကတော့သူတို့ဟာနှစ်ဆသေးငယ်တာကနေခြောက်ခုအထိပေါ့။ သူတို့ပစ္စည်းအများစုကိုပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ပုလင်းတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းတို့သည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အအေးဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်လိင်၊ အမြင့်၊ လို့ပဲအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်တစ် ဦး ပါ။ MagicLinks ကကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုတွေ့ပြီးလက်ဆောင်ကဒ်ပေးတဲ့အခါသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ထင်တယ် ပြီးတော့သူတို့နောက်တစ်စက်ထုတ်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအကြောင်းပြောဆိုရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မလိုပါ။
ငါ Instagram မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစာသားပဲ 'ဟေ့၊ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းအသစ်တွေရှိသေးတယ်။ ငါဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ်။ မင်းလို ၉၈% ကဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဆင်ပြေထင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်သေချာတာပေါ့၊ မင်းဘာပစ္စည်းတွေပေးခဲ့တယ်၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အရာကို ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုမင်းတွေ့ခဲ့ရင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပဲ။ ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့၊ ကမကထပြုတာမဟုတ်ဘူး၊
ဒါကြောင့်ငါကအချို့သော goodies ရှိသည်။ သူတို့ကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနွေရာသီအရောင်အဆင်းများကဲ့သို့အချို့ကိုထုတ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ပြီးတော့ငါအဲဒီအခြေခံအရာအချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အသစ်စက်စက်ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီ။
ဒါနဲ့ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ငါတို့သွားကြကုန်အံ့။ အိုကေ။
ဒီတော့ဒီမှာငါတို့မှာတကယ်ပျော်စရာအရောင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူး ဒီမှာ Girlfriend အကြောင်းပါ။
သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိကြတယ်၊ သူတို့ကပိုပြီးနှေးကွေးတဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်ရန်အများကြီးပိုရှည်ကြာပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာရောင်းထွက်ပြီးသင်ပြန်ဝင်လာသောအခါသို့သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်မကြာခဏသူတို့ကဒီကန့်သတ်ထုတ်ဝေအရောင်များနှင့်အတူမလုပ်ကြပါဘူး။ သူတို့ကပူနေချိန်မှာသူတို့ကြိုက်ရတာပဲ။ ငါ Instagram ကိုသူတို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးသင့်သတိပေးချက်တွေကိုဖွင့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
ငါဒီအဘို့အနည်းငယ်နောက်ကျခဲ့, နှင့်ကံမကောင်းတာငါ argh ငါအသက်တာ၌လိုခငျြအားလုံးကိုက်ညီဘရာစီယာငါလိုချင်သောဘောင်းဘီနှင့်ကိုက်ညီဘရာစီယာရဖို့ကြောင်းကိုက်ညီမှုအစုံလွဲချော်။
ဒါကဒီမှာစျေးဝယ်ခြင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ။ အရမ်းမြန်တာပဲ ဒီတော့လက်ဆောင်ကဒ်နဲ့ငါဝယ်လိုက်တာတွေကတစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးစုံတွဲတွဲနှစ်ယောက်၊ ကြေးဝါနှစ်လုံး။
ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲမင်းထိပ်ကိုပြမယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုမြင်လျှင်, ငါဆင်စွယ်အရောင်အတွက်ဆင်စွယ် Paloma ဘရာစီယာအတွက် Topanga ဘရာစီယာဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါသူတို့အလျင်အမြန်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရရှိနိုင်ရှိသည်ဘရာစီယာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုပ်ပိုး။
ဒီအရောင်စာသားအရာအားလုံးနှင့်အတူသွားတူသောထိုအခါငါခံစားရတယ်။ ငါဒီတစ်ခုကို XXL အရွယ်အစားဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလားတူအပြောင်းအလဲရှိရန်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားမျိုးစုံရှိရန်ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ရနိုင်တာကိုယူလိုက်ပါ။
အစဉ်မပြတ်ငါရလိမ့်မည် ဒါပြီးပြည့်စုံတယ်။ ဒါနဲ့နောက်ထပ်အဓိကအစားအစာလိုချင်တယ်။
ဒီတော့အခုငါဆင်စွယ်ထဲမှာ bust တွေ၊ Topanga နဲ့ Paloma စတိုင်လ်နှစ်ခုလုံးရှိတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်နိုင်အောင်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးခုကိုအတူတကွမစုစည်းနိုင်ခဲ့ရင်၊ သူတို့ဟာနွေရာသီမှာသူတို့ယူလာတဲ့အရောင်သုံးမျိုးပါ။
ထိုစုံတွဲသည်ခရမ်းရောင်ဟုခေါ်သောအလွန်စုံလင်လှပြီး၎င်းတို့သည်ခါးတွင်ဖိထားသောမြင့်မားသောခြေထောက်များဖြစ်သည်။ ငါ XXL leggings နှစ်ခုကိုပိုကြီးအောင်ရွေးခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးမှာ XLs စုံတွဲတစ်တွဲကိုလုပ်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ကိုဖိသိပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်တခါတလေငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအဘို့အကွဲပြားခြားနားသော leggings ချင်တယ်။
တစ်ခါတလေအိမ်ပတ်လည်မှာအိပ်ချင်တယ်၊ လှပတဲ့အဝတ်အထည်လိုဝတ်ရုံနဲ့၊ တစ်ခါတလေငါအလုပ်ကြိုးစားနေတုန်းကတကယ့်ကိုဖိအားပေးခံရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါး၌အချို့သောယောက်ျားများသည်အမှန်တကယ်တွင်အရွယ်အစားကြီးသောခြေနင်းကိုတိုးရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြီးမြတ် fit ။
အရောင်ကအရမ်းလှတယ် ဒီ lilac ကိုငါကြိုက်တယ် ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအရောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါပစ္စည်းနီးပါးကရေကူးဝတ်စုံနဲ့တူနီးပါးခံစားရသည်။ ဒါကြောင့်ပဲဒါကောင်းသောခံစားရပါလျှင်အဖြစ်။ ငါကချစ်ကြတယ်
တကယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့၊ တကယ်ချစ်စရာအရောင်။ ပြီးတော့ငါရတယ်လာမယ့်အရောင်
ဒီမှာအရောင် marigold လို့ခေါ်တယ်။ ထိုအခါငါသူတို့ကိုသာမန်အရွယ်အစားဖြစ်သော XL ၌သာငါရခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့နှင့်အတူတူဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ဒီလေ့ကျင့်ရေးအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
ဒီအရောင်ဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဗုံးတစ်လုံးပါ။ ငါ ၀ ယ်တဲ့အခါမှာရောင်းအားကောင်းလိုက်တာ၊ အရောင်ကဘယ်လောက်ချစ်စရာလဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဘရာစီယာရှာခြင်းအတွက်အင်တာနက်ကိုငါရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဒါကတကယ်တော့အပြင်းထန်ဆုံးအရောင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကင်မရာမှာအဝါရောင်အများကြီးထွက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကိုယ်တိုင်ကလိမ္မော်ရောင်အများကြီးပိုရတယ်။
ဒါဟာ pastel neon orange လိုပါပဲ Marigold ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့နာမည်နဲ့တူတယ်။ ဘယ်လောက်ချိုတာလဲ ဒီဟာက? ငါစာသားဒီတစ်ခုခစျြ။
သူတို့ကအံကိုက်သင့်တယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးကကြီးလှပါတယ် သင်ဟာပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့ leggings များ ၀ ယ်ပါကပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့ leggings များလိုတစ်ခါတစ်ရံသင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများကိုသူတို့မြင်ရလိမ့်မည်။
Cellulite ကပြတာကငါ့ကိုမနှောင့်ယှက်ဘူး။ နံပါတ်တစ်ငါအိမ်မှာထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်နံပါတ်နှစ်ငါ့ကိုယ်၏ထိုအစိတ်အပိုင်းကိုပွေ့ဖက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူတွေက cellulite ရှိတာနဲ့အမျှ၊
ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုကြိုက်တယ် ကျွန်တော့်အတွက်တကယ်ရောင်းလိုက်တာကသူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံရဲ့ပုံပဲ။ သူမသည်အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဗုံးကြဲကြည့်သည်။
မင်းငါ့ကိုရောင်းစားလိုက်ပြီလို့ထင်တယ် ငါစာသားအတိုင်းသင်တို့ကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြက်ခင်း၌ frolic ။ ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုငါပြတော့မယ်။ နောက်တစ်ခုစုံတွဲရဲ့ဘေးမှာပုံရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုငါသဘောကျမှာပဲ။ ငါလက်ဆောင်ကဒ်နဲ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့အရောင်ကအဲဒီအရောင်ပဲ၊ အဲဒါကသံပရာရည်ပါ။
Aah ကဆင်စွယ်ဘရာစီယာနဲ့ကြည့်ရတာတကယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါ အိုး၊ သံပုရာဘရာစီယာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရင်ကောင်းမယ်၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါကအခြားစုံတွဲတွေထက်ပိုပြီးပြောမယ်။ ။ ဒီဟာတွေဟာအများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဟာအပေါ့ပါးဆုံးလို့ထင်ကြလို့ပါ။
သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပေမဲ့သူတို့ကိုသင်ကြည့်ပြီးအခြားအတွဲတွေထက်ပိုပြီးကြည့်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ငါသူတို့ကို XXL မှာပြန်လာတယ်၊ သူတို့ကပူနေချိန်မှာရနိုင်သမျှအရွယ်အစား၊ ငါနှစ် ဦး စလုံးဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးငါအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီတော့ဒီဟာတွေကသိပ်ပြီးအားနည်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါဟာယောဂကိုလုပ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါကကံအတန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာနဲ့ဆန့်နေတယ်၊ ​​အရမ်းပြင်းထန်တဲ့အရာမဟုတ်ပေမယ့်ဘုရား၊ ဘုရားဒီအရောင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြိုက်ဆုံးအရောင်ပဲ။ ။ ငါကအစွဲအလမ်းဖြစ်၏
ငါလက်ဆောင်ကဒ်နှင့်အတူနောက်ဆုံးရအရာကိုငါ Girlfriend Collective ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါငါ့အသမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးအခိုက်အဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဘောင်းဘီသည်ကျွန်ုပ်၌ရှိပြီးသားဘောင်းဘီတစ်ထည်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ အလို။
ဒီတော့ဒါက Moss အရောင်ပါ Paloma bra ပါ။ ငါဒီမှာမင်းကိုပြဖို့ငါပြသခဲ့တဲ့ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုမင်းမှတ်မိနေသေးရင် Moss အရောင်ဆိုင်ကယ်ဘောင်းဘီတိုတစ်ချောင်းဝယ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြန်နေ ဦး မလားစောင့်ကြည့်တော့မယ်။
ထိုအမှုကိုပြု၏။ ဒါကြောင့်ငါနှင့်အတူလိုက်ရန်လက်ျာဘရာစီယာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်သင့်တော်သောအစုံတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မံရရှိခဲ့သည်။
ဒီမှာငါပြမယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအရောင်ကိုစစ်ကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်အရမ်းလှတယ်၊ ငါကအသားအရေနဲ့ဆံပင်အရောင်အပေါ်သိပ်ကြည့်ကောင်းနေမယ်လို့ခံစားရတယ်။ နွေ ဦး ရာသီနဲ့နွေရာသီမှာဒီတောက်ပပြီးပျော်စရာအရောင်တွေရှိလို့ငါအရမ်းပျော်မယ်လို့ခံစားရတယ်။
ပြီးတော့ငါခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့ပိုဆောင်းဆောင်းဆောင်းအရောင်တွေလိုခံစားရတယ်။ ဒီတော့ဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါ Instagram လိုပဲငါလုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကသူတို့ဟာအသစ်စက်စက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမပခုံးအားကစားဘောင်းဘီတစ်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲစခဲ့တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်နှင့်ကံကောင်းတာကကျွန်ုပ်သည်အချို့သောအရသာအချို့ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ငါတကယ်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်
ဤသည်ကိုယခု Bianca BH ဟုခေါ်သည်။ ဒါကသူတို့ရထားတဲ့ဘရာစီယာနဲ့တူတယ်။ ၎င်းသည်တစ်ခေါက်အားကစားဘရာစီယာဖြစ်သည်။
Aah, ဒါကြောင့်အခုကျွန်မရဲ့အနက်ရောင် Girlfriend Collective Leggings ရှိပြီဆိုလျှင်ငါနှင့်တွဲဖက်ထားသောအစုံနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ပခုံးတစ်ခုလုံးဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုငါကအရမ်းစွဲလမ်းတယ်။
ငါသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလုပ်ခိုင်းသလိုခံစားရတယ် ငါဒါကျိန်းသေအသစ်တခုလမ်းကြောင်းသစ်ကိုငါသိ၏။ ဆိုလိုတာက ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတွေတုန်းကငါအများကြီး ၀ တ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလမ်းကပြန်လာပြီ၊
ဒါကတော်တော်လေးလှတယ်။ ငါဒါကို XL မှာမှာထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ခင်ဗျား typa ကိုလုပ်တဲ့အခါအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ၎င်းသည်ရိုးရိုးအနက်ရောင်ဘရာစီယာတစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
ဒါဝယ်ပါ။ ပြီးတော့ငါဝယ်ယူသောအခြားအရာနှစ်ခုကို naja ကဲ့သို့သူတို့၏အသစ်စက်စက်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပြီးငါအလွန်ချစ်စရာဖြစ်သော Poppy ဟုခေါ်သောအရောင်ဖြင့် Bianca ဘရာစီယာကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးသန္တာအရောင်လိုပဲ။ ငါဒါကိုစွဲလမ်းနေတယ်။
ပြီးတော့ငါသည်လည်းကိုက်ညီခြေထောက်ရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီлегဂင်တွေ၊ သူတို့နာမည်ကဘာလဲ သူတို့ကိုသူတို့ကိုအီမန်နီဆွဲကြိုးများဟုခေါ်သည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားဒီမှာရှေ့နည်းနည်းဆွဲနေတယ်။
ထိုအခါငါ XL အတွက်နှစ် ဦး စလုံးဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ကအရမ်းဖိအားရှိပါတယ်။ သူတို့က compression leggings နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
စက်ဘီးစီးသည့်ဘောင်းဘီတိုများကဲ့သို့ပင်ဥပမာ၊ ဤအရာသည်များစွာသောအရာများဖြစ်သော်လည်းသင်ငွေအမြောက်အများမသုံးမီအကြံဥာဏ်ကဲ့သို့သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သူတို့သည်ပျော်ရွှင်စွာကိုင်ထားကာမည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုင်ထားလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားရုံထိုကဲ့သို့သောလှပသောအရောင်များဖြစ်ကြသည်။
ဒီတော့စံ leggings, ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းများကဲ့သို့အပိုအနည်းငယ်နှင့်အတူ, ပြီးတော့ရှေ့နှင့်အတူနှစ်ခုသာအတူတကွနှင့်အတူ။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးကငါဟာငါ့ oats ကိုအရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အလေးအနက်ထား, ဒါကြောင့်သူကပြောတယ်ချစ်စရာ။
ကိုယ့်အရောင်ကိုချစ်။ ငါအရာအားလုံးကိုစွဲလမ်းနေတယ် ဒီခန်းမတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးအရာတွေပဲလိုပါပဲ။
ဒီအ ၀ တ်အစားတွေရဖို့အတွက်တစ်ခုခုကကျွန်မကိုပိုပြီးလေ့ကျင့်ပေးဖို့နဲ့အဲဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုထောက်ခံဖို့အားပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဒေါ်လာကို Black Live Matter လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ရှေ့ကိုရွေ့နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကိုထည့်လိုက်တာကိုခင်ဗျားသိလို့ပဲ။ ဒါကငါထင်သောအရာကိုအရေးပါပေမယ့်ငါတကယ်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့သူတို့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်၊ ခင်ဗျားသိတယ်၊ သူတို့ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အစီအစဉ်ရှိသလား။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များမှတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးပြီဟုသင်ဆုံးဖြတ်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းအားဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အရာဖြစ်စေမဆိုသင်ကသင်၏ပစ္စည်းများကိုသင်ပြန်ပို့နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကသင့်ကိုသေတ္တာတစ်ခုပို့ပေးရန်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကတကယ်တော့အနည်းဆုံးထုပ်ပိုးရှိသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာငါပြခဲ့တဲ့အတိုင်း၊ မင်းရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတော်တူတယ်။ ဒီအထည်နဲ့ဆင်တူတဲ့အချက်လေးများသာဒီမှာပါ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆေးကြောသန့်စင်နိုင်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်
ပြီးတော့သူတို့ကဘာမှမယူကြဘူး၊ အသေးစိတ်သိပ်မပေးရသေးဘူး၊ ငါအရမ်းစိတ်စွဲမှတ်သွားတယ်။ ဘုရားမ၊ ဒီအမှတ်တံဆိပ်သည်ကျား၊ မ၊ လူမျိုးအားလုံး၊ အရွယ်အမျိုးမျိုးနှင့်မော်ဒယ်များအပါအ ၀ င်အံ့သြဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်ကောင်းပါတယ်
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ် Instagram စာမျက်နှာသို့သွားပြီးအဖြူရောင် mockup တစ်ခုထက်ကမ္ဘာကြီးကိုအမှန်တကယ်မည်သို့ပုံဖော်သည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ကိုမြင်ရခြင်းသည်တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းသည်။ ဒီဟာက frizzy feather တွေဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ထိုင်ပြီးထိုင်ပြီးပြောဖို့မင်းကိုကျွန်တော်အားပေးမှာပါ။ ၎င်းသည်ဂျပိန်အဖြူအရွယ်သုညမိန်းမများဖြင့်ပြုလုပ်ထားရုံမျှမက၊ ငါ ၀ ယ်မယ့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားကြည့်ရတာ ၀ ယ်ချင်တဲ့နေရာမှာငါနဲ့တူတဲ့အလောင်းတွေ၊ ငါနဲ့မတူတဲ့အလောင်းတွေ၊
ဒါကြောင့်ငါဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်။ သင်မပြောနိုင်လျှင်ငါကြီးမားသောပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့မည်။ မင်းကအရမ်းကောင်းတယ်
မင်းအဝတ်အစားတွေကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် ငါ၌ပျော်စရာအရောင်များနှင့်ကွဲပြားသောအရာများစွာမှရွေးချယ်ရန်နှင့်ကစားရန်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးအတူတကွရရှိခဲ့သည်။ ငါမှာငါ့အတွက်နည်းနည်းပိုလေ့ကျင့်သင့်တယ်ထင်တယ်
ကျွန်ုပ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားပါကတစ်ရက်လျှင်နှစ်ပတ်လုံးအတွက်နေ့စဉ်ဝတ်စုံများကိုကျွန်ုပ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတာကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အရမ်း ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါစာသားကကိုင်တွယ်လို့မရပါဘူး
ငါငိုတော့မယ် ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုခံစားမျှော်လင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်လုပ်ခဲ့လျှင်သင်ကလက်မလျှော့ဘဲသင်ကျင့်ဝတ်ကိုကြည့်ချင်သည်ကိုသင်သိသောကျင့် ၀ တ်၊ ရေရှည်တည်တံ့သောအ ၀ တ်အထည်အပါအ ၀ င်အချို့သောအရွယ်အစားဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်ကိုအသိပေးပါ။ သင်၏အကြံပေးချက်များကိုချန်ထားပါ။ မင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။ ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှု။ လာမည့်နောက်ဆောင်းပါးတွင်တွေ့ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် Lululemon ဒီလောက်စျေးကြီးကြသနည်း
နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်Lululemon ရဲ့များစွာသောအရေအတွက်ပါဝင်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်စျေးကြီးဒေါ်လာထောင်သောင်းချီတန်ကုန်ကျသောစက်များ။ ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏ VP ကတစ်ကြိမ်ကထုတ်ကုန်ကိုစစ်ဆေးရာ၌ ၁၃ ကြိမ်မှ ၁၅ ကြိမ်အထိစမ်းသပ်မှုများရှိနိုင်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာလဲဘာလဲ၊ သင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းနွမ်းနေပြီ၊ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအသေးစိတ်ကျသော lululemon leggings ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါဟာငါ့ရဲ့ lululemon အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးနေရုံသာမကငါဟာငါနင်းတစ်စုံအတွက်ဒေါ်လာ ၄၀ ကျော်ပေးဆပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ် အခုအချိန်မှာဝတ်ဆင်ထားတယ်၊ ငါ့ရဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာငါသူတို့ကိုခြောက်သွေ့တဲ့လေမှုတ်စက်ကနေထွက်လာတဲ့ဒုတိယကတော့သူတို့ဒေါ်လာ ၁၈ ဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုသင် Lululemon ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်လည်သုံးသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပိုက်ဆံရှိသလားဆိုတာမရှာချင်ဘူးလား , ငါသည်သင်တို့၏မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုဤသည်သင်၏ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တစ် ဦး တစ်ယောက် onagram မှငါ့ကိုဤဆောင်းပါး tipsy လုပ်ဖို့ငါ့ကိုမေးတော့လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ငါတို့ lululemon အိတ်များအတွက်စပျစ်ရည်ဖန်ခွက်ကုန်သွယ်တာပေါ့။ ဒီဟာတွေကဒေါ်လာနှစ်ရာတဆယ်တန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်လို့ငါ catwalk မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့မီးခိုးရောင်အရောင်နဲ့ Lululemon-facing ဘောင်းဘီတစ်ချပ်ရတယ်၊ ငါမဖြုန်းတီးတဲ့ Miracle Panties Leggings တစ်စုံကိုလည်းဝယ်ခဲ့တယ်။ Lululemon ဆီကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ဘောင်းဘီ ၂ ခုပဲဆိုတာကြော်ငြာပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေထဲကအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ရမယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်ငါ့ကိုစတိုးဆိုင်ထဲမှာကူညီပေးတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ကွယ်မှငါရလိမ့်မယ် ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး၊ ငါလမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ ငါမတင်နိုင်တော့ဘူး။ ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ငါဒီဆေးပြားကိုကြောက်တယ်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွေအများကြီးအကြောင်းဒီမှာငါတို့ဝိုင်ထဲမှာရှိနေတယ် ဌာန၊ ညနေ ၃ နာရီ
တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုဒါအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။ ဒါကြောင့်ငါအရွယ်အစားနှစ်တန်းကို ၀ ယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအောက်ခြေမှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိတယ်လို့ငါကြားဖူးတယ်။ ဒါ့အပြင်သေးငယ်တဲ့သေးငယ်တဲ့အောက်ခြေတစ်ခုရဲ့အံ့ဖွယ်အမှုကဒီဟာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒေါ်လာ ၁၈ ပါ။ ဒါကတောင်သူလယ်သမားခြေနင်းကကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုကြည့်နေသလဲ။ ဒါဆိုရင်ဒီခြေထောက်တွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော့ပျောင်းပါတယ်။ မင်းကအရမ်းပျော့ပျောင်းနေတယ်၊ ​​အရမ်းပျော့ပျောင်းပေမယ့်ငါဒါကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမယ့်ငါသူတို့ကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကအရမ်းကိုခါးခါးသီးသီးဖြစ်နေလို့ပဲ။ ငါခြေတစ်ချောင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၉၈ ပေးရင်ခါးကိုမဖွင့်သင့်ရင်ငါဒီအင်္ဂလန်မှာသွားအမြင့်ဆုံးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာငါနွမ်းလျနေသမျှကာလပတ်လုံးဆေးလုံးပါလိမ့်မယ် သူတို့ကိုငါအိမ်မှာရှိနေတုန်းပဲ ကခါးမှကြွလာသောအခါစတိုင်။ ငါတိုတောင်းသောကိုယ်ထည်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုကြိုက်သလားမသိသော်လည်း Jimshark ကိုကျွန်ုပ်မုန်းသောတူညီသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည် - ချောမွေ့စွာ၊ သူတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နို့သီးခေါင်းများဆီသို့ဆင်းလာပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးရင်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဘူလိုမင်အလွန်လွယ်ကူတဲ့အကောင်းမြင်သဘောထားတွေနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးငါ့ရဲ့စူပါပျော့ပျောင်းတဲ့ lululemon leggings သူတို့ဟာသင့်ရဲ့ Bum ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစေပါတယ်။ သူတို့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပါ။ ဒါပေမဲ့အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jack-in-the-box tacos ၂၀၀ ကို ၀ ယ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းအတူတူဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ငါအကောင်းဆုံးကြိုတင်ကြိုကြားကြိုကြားဖတ်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့အလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရည်အသွေးမြင့်သူတို့ကအရမ်းမြင့်မားသောခါးဖြစ်ကြ၏, အဘယ်ကြောင့်ငါ့ခြေနင်းဒီနေရာကိုငါမသိရတယ်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းငါအဝတ်အချို့အဝတ်ကိုလျှော်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်မဖြစ်သင့် ဘယ်သူ့မှာအချိန်ရှိသလဲ၊ နောက်ဆုံးမှာငါမှာများပြားလှတဲ့ leggings တွေအများကြီးရှိတယ်လိုစျေးနှုန်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံအတွက် Amazon ကို ၀ ယ်ထားတဲ့ Free Return Free Returns ကဒီဝတ်စုံတွေကိုဘယ်တော့မှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တဖန်ငါကဒီ leggings ထဲကတစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာနဲ့ပေးရင်ငါ pr သူတို့ဟာ ၂၅ ဒေါ်လာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါအံ့သြစရာကောင်းမှာပဲ။ ငါအမေဇုန်ကနေမှာယူလိုက်တယ်၊ Woody'snope မှာငါဒေါ်လာ ၂၅ နဲ့ဝယ်ရင်တောင်ငါဒီကိုပြန်ရလိမ့်မယ်။ မသိရပါဘူးငါမရခင်ကစစ်ဆေးခဲ့သင့်တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါဟာသံပုရာရည်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ ဒီအင်္ကျီတွေပေါ်မှာရှိပါစေ။ ပြီးတော့အခြားအပေါင်တွေအကုန်လုံးပြောပါ။ ဒါကြောင့်ငါက ၂၅ နှစ်အောက်ဖြစ်တဲ့ Amazon ကနေရပါတယ်။ မင်းအတွက်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရည်အသွေးကောင်းတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့သူတွေကပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ မင်းကငါ့ကိုမေးတယ်၊ ငါပြောမယ့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမင်းသိပြီထင်ရင်၊ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကို Amazon Likes Haul ဆောင်းပါးမှာတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ YouTube မှာဆောင်းပါးကိုမြင်ဖူးတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံး၊ ငါနည်းနည်းမူးနေတယ်၊ လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းမှာငါလာမယ့်အပတ်မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ဒေါ်လာ ၂၅ နှစ်အောက်စျေးသက်သာတဲ့ Amazon ၀ န်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကျွန်မရဲ့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကျော်သွားမယ်
ဘယ်အုပ်စုသည် lululemon ကိုဝတ်ဆင်သလဲ။
Lululemon ရဲ့လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကလှုံ့ဆော်သည်အသက်အရွယ်များအတွက် 1635. ၏လက်ရှိပစ်မှတ်စျေးကွက်၏Lululemonအကြားအထက်လူလတ်တန်းစားအတွက်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အသက်အရွယ်တစ် ဦး ကြံ့ခိုင်ရေးအတွေးအခေါ်နှင့်အတူ 18 နှင့် 35 ၏။08.01.2018
LululemonAthletica Inc. သည်ကျန်ရှိနေသေးသော Ivivva ကလေးတွေဆိုင်များကိုပိတ်ပြီးကလေးများမှထွက်သွားလိမ့်မည်အဝတ်အစားအမျိုးသားစျေးကွက်ကိုနှစ်ဆတိုး။ နိုင်ငံတကာတွင်ချဲ့ထွင်ရန်အာရုံစိုက်သောကြောင့်စျေးကွက်။
Lululemonကျန်ရှိနေသေးသောစတိုးဆိုင် ၇ ခုအပါအ ၀ င် Ivivva တံဆိပ်ကိုပိတ်ပစ်နေကြောင်းကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Retail Dive ကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ 'ကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ကြွစွာပါဝင်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်မိန်းကလေးများကျနော်တို့ကတဆင့်သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်မျှော်လင့်နေပါတယ်lululemonအမှတ်တံဆိပ်။ '
lululemonပုံမှန်အားဖြင့်ဆင်မြန်းသေးငယ်တဲ့ပြေး။ ငါကျိန်းသေအကြံပြုပါသည်အရွယ်အစားသူတို့ရဲ့ဆင်မြန်းများနှင့်ညနေခင်းဝတ်ဆင်မှုများတွင် သင်အပေါ်လျှင်သေးငယ်သည်အဆုံးlululemon'sအရွယ်အစားရောင်စဉ် (အရွယ်အစား4 နှင့်အောက်), သင်၏lululemonစားဆင်ယင်အရွယ်အစားအလိုတော်fitအများကြီးသေးငယ်သည်သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ထက်အရွယ်အစား။ သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အရွယ်အစားသိသိသာသာတက်။
သင်ဖြုန်းဖို့တတ်နိုင်လျှင်ပိုက်ဆံကနေအနည်းငယ်သော့ကိုအပိုင်းပိုင်းပေါ်မှာLululemonအပြေးဖိနပ်တစ်စုံ၊ အားကစားဘေ့စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုနှင့် Reversible 5mm The Mat ကဲ့သို့အဲဒါပိုက်ဆံရတယ်။ မင်းအရင်ငါပြောခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာဆိုရင်ယင်းသင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းတစ်ချိန်တည်းလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုသာဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံး။
အချိန်ပြည့်Lululemon န်ထမ်းရ60% သို့ဝန်ထမ်းလျှော့စျေး။ အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းများ၂၅ နာရီအောက်ရပါတယ်၄၀% အထိလျှော့စျေး။ markdowns များအတွက်ဝန်ထမ်းများမူရင်းစျေးနှုန်းအပေါ် 75% အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။၁၈ ။ 2021 ။
Lululemon သည် ၄ ​​င်း၏ Ivivva ကလေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းရန်စီစဉ်နေသည်။ အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာရောင်းအားတိုးတက်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျန်ရှိနေသောစတိုးဆိုင်အနည်းငယ်ကိုပိတ်ထားရန်ပါဝင်ကြောင်း CNBC မှလေ့လာခဲ့သည်။
Lululemon တွင်ကလေးများသည်မည်သည့်အဝတ်အစားများကို ၀ တ်ဆင်ရသည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရွယ်အစားများအတွက်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ။ Lululemon Athletica သည်ကလေးငယ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်အမျိုးမျိုးဖြင့်တက်ကြွသောအဝတ်အစားများ၊ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်သည်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အပြင်၌ကစားခြင်းတို့တွင်သူတို့၏အကောင်းဆုံးကိုကြည့်ချင်သောမိန်းကလေးငယ်များအတွက်စတိုင်ကျသည့်စုဆောင်းမှုကိုလည်းပေးသည်။ Lululemon သည်အချိန်တိုင်းရာသီဥတုပူနွေးသောအပြင်ဘက်အ ၀ တ်အစားများ၊
lululemon.com ပေါ်ရှိ privacy မူဝါဒကဘာလဲ။
lululemon သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအချိန်မရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ သို့သော် lululemon သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဝေါဟာရများကိုသင်၏လက်ခံမှုကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ဆိုဒ်များအားဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုပြုမူပါမည်။